Viber yakagadziridzwa ichikubvumidza iwe kugovana, kuongorora, kudzima uye kudzoreredza zvitambi | IPhone nhau
Viber yakagadziridzwa ichikubvumidza iwe kuti ugovere, kuongorora, kudzima uye kudzoreredza zvitambi
Munhu haagare paWhatsApp ega. Kana yeTeregiramu, iko kunyorera kwatinogara tichirumbidza. Mumusika tinogona kuwana mamwe mameseji ekunyorera, mafomu ayo anonyanya kushandiswa mune mamwe matunhu epasi, seViber. Iyi yekushandisa mameseji, kunyangwe iri mumaoko eJapan (Rakuten), mune kumwe kunonyanya kushandiswa mameseji kunyorera munyika dzeArabhu.
Vibre chaive chimwe chekutanga kunyorera kubvumidza kushandiswa kwezvinamirwa, kana zvimiti sekudanwa kwazvinoitwa nemusunguri, muhurukuro dzekutaura. Nekufamba kwenguva uye sekuziva kwedu tese, iyi sarudzo yanga ichiwedzera uye yatovepo mune mazhinji mameseji ekunyorera, kunze kweWhatsApp.
Viber ichangobva kuburitsa nyowani nyowani nevashandisi vetiketi ivo vanozogona kugovana zvimiti izvo zvavakangotenga kutenga neshamwari / shamwari dzekukurukura. Usati wazvitenga, kana zvisingawanikwe zvekurodha mahara, vanogona kufanoona zvese zvirimo kuti vave nechokwadi chezvavari kuzotenga.
Iyi yekuvandudza zvakare inovandudza iyo yekuchengetera inogarwa nechishandiso. Pakutanga, patakabvisa boka rezvinamirwa, raigara riri pachigadzirwa, asi mushure meichi chigadziriso, kana tisingade kushandisa boka rezvinonamira, tinogona kuvabvisa zvachose kubva pachigadzirwa chedu. Uye zvakare, zvinotibatsirawo kubata nzvimbo inoshandiswa nemifananidzo nemavhidhiyo atinogashira kuitira kuti chive application chinotora nzvimbo yakakura kwazvo pane yedu kifaa.
Chii chitsva muViber vhezheni 6.2
Pane mumwe munhu chaiye anouya mupfungwa paunoona chitsva chekunamatira pakiti? Muite azive kuti inowanikwa ipapo muDecal Shop
Kuchengetedza kwekushandisa optimization: kusanganisira iyo sarudzo yekudzima mapepa ekunamatira ayo asisiri kushandiswa, kuchengetedza nzvimbo
Dhizaini preview: kuongorora zvisarudzo usati watumira, refu ubate
Zvino tumira mari kubva kuUnited States kune chero munhu ari munyika dzinopfuura mazana maviri nematunhu, anofambiswa neWestern Union®
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Viber yakagadziridzwa ichikubvumidza iwe kuti ugovere, kuongorora, kudzima uye kudzoreredza zvitambi